Shirkado Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Joogtada ah iyo Warshad | YiZheng
Waa maxay Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mideysan?
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka waa qalab isku qasid lama huraan u ah habka soo saarista bacriminta. Waxay ka kooban tahay isku darka dhululubo, jir, matoor, hoos u dhige, gacan rogaalcelis ah, qulqulaya qashin, nadiifinta wax lagu nadiifiyo, iwm. Mashiinkaani wuxuu korsadaa cirbadaha loo yaqaan 'cycloid irbad reducer' si uu toos ugu kaxeeyo, taasoo hubinaysa wax soo saar aamin ah
Waa maxay Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ah loo isticmaalo?
Kuweena Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka iyada oo ah qalab isku dhaf ah oo lagama maarmaan u ah khadka wax soo saarka bacriminta. Waxay xallineysaa dhibaatada in xaddiga biyaha ee lagu daray geeddi-socodka isku-dhafka ay adag tahay in la xakameeyo, sidoo kale waxay xallisaa dhibaatada ay maadaddu u fududahay in loo hoggaansamo lagana dhigo agglomerate sababo la xiriira xoogagga kicinta yar ee isku-darka isku-darka bacriminta.
Codsiga Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ah
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka isku qasan doona alaabta ceyriinka ah ee kala duwan si loo gaaro ujeedada isku dhafka isku dhafka ah oo dhameystiran.
Faa'iidooyinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ah
(1) Sababtoo ah iskuxirka iskutallaabtu wuxuu kuxiranyahay inta udhaxeysa majarafadda iyo gacan wareegsan, iyo usha jiida ama fur ayaa loo habeeyay si loo habeeyo farqiga shaqada ee majarafadda walaaqaysa, ifafaalaha walxaha adag ee ciriiriga ah ayaa asal ahaan laga tirtiri karaa hawlgalka iska caabin iyo gashaan.
(2) Xagasha udhaxeysa dusha shaqada ee majarafadda walaaqeysa iyo jihada horay u socota ee jihooyinka toosan iyo kuwa toosan labaduba waa cadaan, oo kor u qaadi kara saameynta kicinta iyo hagaajinta tayada isku darka.
(3) dekedda dheecaanku waxay ku taal derbiga dhinaca foostada. Foostada ayaa si is beddel ah u laalaadin karta barxadda, oo xoq ayaa la dejin karaa si loo dedejiyo dheecaanka iyo si ka sii fiicanba
(4) Waa wax fudud oo ku habboon in la ilaaliyo.
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Muuqaalka Muuqaalka ah
Xulashada Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Awoodda ka bixitaanka
25-30 m3 / saac
≥35 m3 / saac
≥40 m3 / saacaddii
Kicinta xawaaraha usheeda dhexe
35r / daqiiqo
27 r / daqiiqo
Sare u qaad xawaaraha gooska
Awoodda matoorka kiciya
muuji awooda mootada
Cabbirka ugu badan ee isku-geynta
Cabir qaabeed （HxWxH）
Miisaanka unugga oo dhan
Hore: Mashiinka Bacriminta BB
Xiga: Mashiinka Qalalan ee Rotary Single Silinda ee Ku Shaqeynta Bacriminta
Hordhac Waa maxay Mashiinka Qaboojiyaha Caleemaha? Mashiinka Qaboojinta Bacriminta Pellets waxaa loogu talagalay inuu yareeyo wasakheynta hawada qabow iyo inuu hagaajiyo deegaanka shaqada. Isticmaalka mashiinka qaboojiyaha durbaanka waa inuu gaabiyo geedi socodka soosaarka bacriminta. Ku habboonaanta mashiinka qalajinta wuxuu si weyn u horumarin karaa co ...